UMCULI UJUSTIN TOWNES U-EARLE USWELEKE ENEMINYAKA ENGAMA-38 - IINDABA
Umculi uJustin Townes u-Earle usweleke eneminyaka engama-38
Umculi-umbhali weengoma uJustin Townes Earle usweleke ngeCawa, nge-Agasti 23. Wayeneminyaka engama-38.
Kuyadanisa kakhulu ukuba sikwazisa ngokusweleka konyana wethu, umyeni, utata kunye nomhlobo uJustin, funda ingxelo ekhutshelweyo ekwabelwana ngayo kwiphepha lakhe lewebhu likaFacebook. Ke uninzi lwenu lusenokuthembela kumculo wakhe kunye namazwi kuyo yonke le minyaka kwaye siyathemba ukuba umculo wakhe uza kuqhubeka nokukunika ulwazi kuhambo lwakho. Uya kukhunjulwa kakhulu nguJustin.
Ukuqinisekiswa kugqitywe nge-lyric evela kwingoma ka-Earle Ukukhangela iNdawo yoMhlaba kwi-albhamu yakhe ye-2015, Ootata abakhoyo : Ndinqumle iilwandle / Ndalwa nemvula ebandayo kwaye ndivuthuza isanti / Ndiwele imikhondo kunye neendlela ndibuza nemilambo / Ndikhangela indawo nje yokufika emhlabeni.
UJustin Townes Earle UJeff Ross / uShutterstock
Isizathu sokufa kwakhe sasingaziwa kwangoko.
U-Earle wayengunyana weenkwenkwezi zelizwe USteve Earle , owamthiya ngegama lomnye umculi Townes Van Zandt. Umama wakhe, UCarol Ann Hunter , wayengenguye umlandeli wesihloko, nangona kunjalo.
Umama wam wamthiya uTownes Van Zandt. Isihloko sam sokuqala sasicinga ukuba yiDolophu, nangona kunjalo umama wayengenayo, u-Justin wacebisa Amatye agiqekayo kwiprofayile kaMeyi 2019. Wayemthiyile ngenxa yobunzima awayebuthengile uTata naye, nangona kunjalo wenza umculo wakhe.
USteve Earle RMV / Shutterstock
I-crooner yaseHarlem River Blues yenziwa ngokwamaqela ahlukeneyo kwindawo yakhe yaseNashville ngaphambi kokukhulula i-EP yakhe yokuqala, Yuma , ngoFebruwari 2007. Icwecwe lakhe lokuqala, Ubomi obuLungileyo , ndiphume apha emva konyaka. Ngomxube wakhe owahlukileyo wabantu, isizwe, iblues kunye nomphefumlo, kungekudala wajika inkwenkwezi kwezorhwebo lomculo, uMculi ophumeleleyo woNyaka woNyaka eMelikaana Music Honours & Amabhaso ngoSeptemba 2009.
UJustin wasungula iialbham ezili-9 kuwo wonke umsebenzi wakhe, kunye netrilogy ka Oomama Abangatshatanga (2014), Ootata abakhoyo (2015) kunye Abantwana ngaphakathi kwesitalato (2017). Ugqibezele ngokusesikweni i-albhamu ngoMeyi 2019, enesihloko INgcwele yeZizathu eziLahlekileyo .
Njengoyise owaziwayo, uJustin wazabalaza ngomkhwa ukususela ebutsheni kwaye wajonga kwimeko yesiqhelo izihlandlo ezininzi. Wachaza ngoJuni 2017 ukuba wayengenangqondo.
Umntu osonwabisa umntu usinda kwiqabane lakhe, UJenn Marie Earle , owatshata naye ngo-Okthobha u-2013, kunye nentombi yabo eneminyaka emithathu, u-Etta St. James.
U-nancy uzobe ixesha lonyaka 1 isiqendu 4
Ngubani uBrandi Boyd
mr miyagi vs kreese
isixeko esinomoya sihlala imivuzo yomamkeli
Umsindisi 2 ithuba labaphangi